5 Fikradaha Suuqgeynta Macluumaadka ee Abriil 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/5 Fikradaha Suuqgeynta Macluumaadka ee Abriil 2021
5 Fikradaha Suuqgeynta Macluumaadka ee Abriil 2021
Fursadaha suuq-geynta nuxurka ayaa badan Abriil 2021, oo leh mowduucyo kala duwan sida Pony Express, Maalinta Beerta Qaranka, Maalinta Dhirta, iyo TikTok.
Suuqgeynta nuxurku waa ficilka abuurista (ama curinta) ka kooban, daabacaadda, iyo kor u qaadida si ay u soo jiidato, uga qaybgasho, oo u hayso dhagaystayaasha macaamiisha iyo rajada.
Waxa soo socda waa shan fikrado suuqgeyneed oo nuxur ah oo loogu talagalay shirkaddaada Abriil 2021.
Aasaaska Pony Express: Abriil 3
Taariikhdu waxay noqon kartaa isha fikradaha suuq-geynta nuxurka. Waxay naga caawisaa inaan fahanno aduunka maanta.
Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, ka fiirso in lagu daro abuurista Pony Express suuq-geynta nuxurka ee shirkaddaada Abriil 2021.
Warqadan oo laga soo calaamadeeyay Pony Express ee ugu horeysay ee orday 1860 waxay muujineysaa inay qaadatay 10 maalmood in laga tago California ilaa Missouri.
The Pony Express waxa uu bilaabmay Abriil 3, 1860, markii fardooleydu ay isku mar ka tageen St. Joseph, Missouri, iyo Sacramento, California, iyagoo saaran 1,800-mayl isu-gudbineed. Boostada Sacramento waxay ku timid St. Joseph 10 maalmood gudahood.
U oggolow astaanta shirkaddaada iyo yoolalka suuqgeynta nuxurka inay kuu sheegaan sida aad u dhexgelin karto sheekada Pony Express.
Tusaale ahaan, tafaariiqle iibiya kabaha cowboy-ga, dharka reer galbeedka, ama xitaa xargaha sinnaanta ayaa sheegi kara xaqiiqooyinka taariikhiga ah, iyaga oo diiradda saaraya waayo-aragnimada galbeedka duurjoogta ah, sababtoo ah taasi waxay si fiican ugu hawlgeli kartaa macaamiisha ganacsiga.
Tafaariiqle kale ayaa wax ka qori kara Pony Express marka la eego macnaha gaadiidka.
Maalinta Beerta Qaranka: Abriil 7
Maalinta Beerta Qaranka waa fasax ku cusub Maraykanka. Waxaa markii ugu horreysay la dabaaldegay 2009-kii markii Justin Smith oo ka tirsan Richmond, Virginia, uu sameeyay bog Facebook ah oo sharraxaya dabaaldega, kaas oo la sheegay in lagu sharfay maalintii Sharciga Cullen-Harrison la sameeyay 1933-kii, taasoo sharci ka dhigtay in la iibiyo biirka leh qamriga. 3.2 boqolkiiba ama ka yar gudaha Maraykanka. Falku wuxuu ahaa bilawga dhammaadka mamnuucida.
U dabaaldeg Maalinta Beerta Qaranka qoraal ahaan iyo, laga yaabee, hal pint ama laba. Sawirka: Radovan.
Maalinta Beerta Qaranka ee Smith ayaa lagu daboolay warbaahinta waxaana si rasmi ah looga aqoonsaday Virginia 2017.
Suuqgeynta macluumaadka ee shirkaddaada bisha Abriil waxaa ka mid noqon kara maqaallada biirka la xiriira, sida:
"10 siyaabood oo lagu xalliyo dhib kasta oo Beer,"
"5 Xaqiiqo oo madadaalo leh oo ku saabsan Beer iyo Aaladaha Korontada,"
"7 sir oo ku saabsan Beer oo aan qofna kuu sheegi doonin,"
"Sida loo doorto Beerka ugu Wanaagsan Cunto kasta."
Si aad u hesho dhiirigelin dheeraad ah, tixgeli in shirkadda dharka ee Mr. Porter ay daabacday daraasiin maqaallo ah oo ku saabsan biirka, oo ay ku jiraan:
"Sideed Beerood oo Farsamada Gacanta ah oo Cusub oo lagu tijaabinayo Xagaagan,"
"Kacitaanka Dukaanka Beer-Craft-ka ee Cabitaanka,"
"Shan xaj oo qof kasta oo Beer jecel waa inuu sameeyo,"
"Shanta Beer ee Farshaxanka ugu Fiican,"
"Sida Loo Dhigo Beer Iyo Cunto."
Maalinta Dhirta: Abriil 30
Maalinta Dhir-beeraha waxa ay ina xasuusinaysaa in aan beerno, korinno, oo xusno geedaha. Sawirka: D. Jameson Rage.
Maalinta dhir beerista waxay ka bilaabatay Nebraska sanadkii 1874. Waxaa laga xusaa taariikho kala duwan dalka Mareykanka oo dhan, iyadoo jimcaha ugu dambeeya ee Abriil (30-ka ee 2021) uu yahay midka ugu badan.
Maalinta Dhirta waxaa loola jeedaa in lagu dhiirigaliyo dadka inay beeraan, koraan, oo ay xusaan geedaha. Suuqgeynta nuxurka ee shirkaddaada Abriil, waxaad fikradahan ugu gudbin kartaa maqaallo, fiidyowyo, iyo muuqaallo muuqaal ah.
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah:
Bakhaarka beerta: Daabac casharrada beerista geedaha.
Tafaariiqle kabaha orda: Daabac maqaal ku saabsan orodka kaynta.
Ganacsade qalabka korontada: Soo saar podcast ku saabsan alwaax waara.
Iibiyaha alaabta guriga: Sharaxaad ka bixi alwaax adag iyo sida ay macaamiishu u heli karaan.
Haddii aad si dhakhso leh u sharaxi karto alaabtaada ama adeeggaaga, tixgeli abuurista fiidiyowyada TikTok.
Tusaale ahaan, Jon Shanahan, oo ah aasaasaha Stryx, oo ah shirkad daryeelka maqaarka ragga, ayaa ku dhawaad ​​1.8 milyan oo likes u sameeyay bogga shirkadiisa TikTok.
Jon Shanahan ayaa ka caawiyay Stryx horumarinta daawadayaasha TikTok. Dhegaystayaashaasi waxay sidoo kale gacan ka geysteen iibinta iyo faa'iidada shirkadda.
Mawduuca TikTok waa inuu ka muuqdaa shaqsi matala astaanta. Mawduuca ku jira waa inuu noqdaa mid u dhashay TikTok, taasoo la macno ah in loo sameeyay TikTok oo ay raacdo xeerarkeeda.
TikTok kuma koobna macluumaadkaaga kuwa raacsan Waxay hordhigtaa fiidiyowyada hor, suurtagal, dhammaan isticmaalayaasha. Marka loo eego Shanahan, oo ka qaybqaatay waraysi toos ah oo loogu talagalay CommerceCo by Practical Ecommerce, muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay ee TikTok waxaa la arkay in ka badan 300,000 jeer.
Tixgeli inaad soo saarto fiidiyowyo xaqiijinaya qaab nololeedka summadaadu horumariso.
Tusaale ahaan, Shirkadda Maverick Car Company ee ku taal Boise, Idaho, waxay iibisaa baabuurta waaweyn iyo baabuurta ciyaaraha. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha shirkadu waxay ku raaxaystaan ​​qaab nololeed dibadda ah oo firfircoon, markaa shirkadu waxay abuurtaa muuqaalo diirada saaraya hawlahaas. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah fiidiyowyada ku saabsan kabaha barafka, barafka barafka, iyo fuulitaanka dhagaxa.
Apple TV 3 ayaa luminaya taageerada YouTube-ka, laakiin waxaa jira hab-dhaqan
Odhaahda "Link in Bio" ma saameeyaa waxqabadkaaga boostada Instagram? (Tijaabi)